Isihloko: I-Lignaggi - Gxila ngqo maphakathi kuze kubonakale umbono we-Universe yakho
Lignaggi - Umsuka wangempela "wobukhona" bethu, amandla ethu ayingxenye yoMkhathi (ama). Kodwa-ke ukhombisa lokhu, noma uqonde isisekelo seqiniso nencazelo engemuva kwaso, ngokuqinisekile kusekelwe ekuboneni kwethu ngabanye. Noma ngabe lokhu kusezingeni lokuqonda kanye / noma lokuqonda.
Lo msebenzi wobuciko wadalelwa ukudonsela obukayo engqikithini yawo. Ukubamba konke ukunaka kwakho isikhathi eside ngokubeka wonke amandla akho endaweni eyodwa nokuphela kwayo, maphakathi nakho konke.
Sivame ukuphazanyiswa yimikhankaso yezentengiselwano yezinkampani, imithombo yezokuxhumana eku-inthanethi, i-intanethi, ukugcwala kwezinhlelo zokusebenza nezinhlelo zemidlalo ezibonakala zingcolisa futhi zifiphaza ingqikithi yethu yangempela njengabantu.
Inhloso yami ukuthi umbukeli agxile kulo msebenzi wobuciko ngakho konke okulula nokungena kwawo maphakathi nendawo ngaphandle kokwenza inkinga ngokucabanga ngokweqile. Ukuzibandakanya esimweni sokuzindla ngaphakathi kwe-nucleus yalo mdwebo.
Vala konke phansi bese umane ube.
Ububanzi: amasentimitha angu-36 / 91.44 amasentimitha
Ukuphakama: 48 amayintshi / 121.92 amasentimitha
Ukujula: 1.5 amasentimitha / 3.81 amasentimitha
I-Acrylic ivuliwe Igalari Esongwe Heavy Duty Canvas